I-Aaron Connolly Ibali loBuntwana beNqaku leNqaku leNgcaciso yeBantwana
ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL I-Aaron Connolly Ibali loBuntwana beNqaku leNqaku leNgcaciso yeBantwana
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGlaus Genius eyaziwayo ngegama elithi "I-whizzkid". Ibali lethu le-Aaron Connolly yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukusuka ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi kunye nokuPhakama kuka-Aaron Connolly. IiCredits Zemifanekiso: Telegraph, Ezizimeleyo kunye ne-Twitter
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba wayengumntu ovuthiweyo owayehlisa iSpurs kwi-Premier League yakhe yokuqala ye-2019 / 2020 isizini. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga i-Biography ka-Aaron Connolly enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
Iinombolo ze-Aaron Connolly yobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
Ukuqala, amagama akhe apheleleyo nguAaron Anthony Connolly. U-Aaron Connolly wazalwa ngomhla we-21st kaJanuwari 2000 kunina, uKaren Connolly kunye noyise, uMike Connolly e-Oranmore, idolophu kwiRiphabhliki yaseIreland. U-Connolly wayengumntwana wokuqala ukuzalwa kubazali bakhe abathandekayo base-Ireland aboniswe ngezantsi.
Dibana nabazali baka-Aaron Connolly Karen noMike. Ityala lemifanekiso: Ezizimeleyo
UAaron Connolly usapho lwayo luvela e-Oranmore, idolophu ese-County Galway, kwintshona yeIreland. Indawo awayevela kuyo idla ngokubizwa ngokuba yiNkcubeko ye-Intanethi yeIreland, indawo eyaziwa ngokuphila ubomi obonwabisayo kunye nemibhiyozo emininzi yomthendeleko.
Umbono omuhle ka-Oranmore eGalway County, eIreland- apho u-Aaron Connolly wavela khona. Ityala kwi I-Irelandbeforeyoudie
UAron Connolly akakhulela kwimvelaphi yosapho olufumileyo. Abazali bakhe babe njengabantu abaninzi abenze imisebenzi e-Ireland kodwa babengabinangxaki yemali yokufumana usapho. Ngokweengxelo zosasazo lwentlalo, uAaron Connolly wakhula kunye nomntakwabo ogama linguEthan Connolly owayenaye, naye waba ngumdlali webhola.
Iinombolo ze-Aaron Connolly yobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Imfundo kunye neBraduer Buildup
Abazali baka-Aaron Connolly ekuqaleni babefuna ukuba unyana wabo abe sisifundiswa engenalo nofifi lokuba angaze ayenze kwezemidlalo. Emva ngelo xesha, uCololly wayeya kuhamba malunga nezifundo zakhe zesikolo iBrierhill National School eseMpuma Galway. Ngexa wayesesikolweni, wayeneliso elibukhali kwibala lebhola ecaleni kwesikolo awayehlala edlala ibhola emva kokuba efundile.
Owayesakuba ngumfundisi-ntsapho kwisikolo sikaBrierhill kuZwelonke ehamba ngegama nguConor Hogan ukhumbula uAaron Connolly oselula njengomntwana omncinci owayeza kunxiba ijee yebhola ebhabha ejikeleza le ndawo kwaye ekhaba ibhola yomnyazi, ngaphandle kwemeko yemozulu.
Iintsuku zokuqala zika-Aaron Connolly kunye nesikolo iBrierhill National. Ityala lemifanekiso: I-Twitter
"Ndibambele utitshala obambeleyo apho iinyanga ezintandathu kwaye ndiyakhumbula ukuba iklasi yakhe yayinabafana abancinci be-30 kwaye uAaron Connolly wayephakathi kwaba bambalwa kakhulu kwaba bafana ababedlala imidlalo." UConor Hogan, owayesakuba ngutitshala uyakhumbula.
Njengomqhubi oselula, u-Aaron Connolly wafunda urhwebo lwebhola njengelukhuni, elandayo ukuya phambili. Ngamaxesha athile, kwenzeka kubazali bakhe ukuba Akuzange kubekho mathandabuzo okuba uAron wayesiya kwicala elililo. Okokugqibela, ikratshi lamalungu osapho lwayo uAaron Connolly kunye nootishala besikolo bengazi mida xa amenyelwa ukuya kuvavanyo eMervue United.
Iinombolo ze-Aaron Connolly yobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala
Ngonyaka we-2011, u-Aaron Connolly wenza inyathelo lokuya kwiklabhu yaseGalway yeqela eliphambili lesikolo saseMervue United apho afike wamkelwa khona kwisikolo semfundo emva kokuphumelela kwezilingo zabo ngemibala ephaphazelayo. Ukuqonda umnqweno womfana wabo wokudlala ibhola ukuze aphile, abazali bakaConnolly benza konke abanako ukuxhasa iminqweno yakhe.
UAron Connolly waseBuntwaneni oQeqeshayo. Ityala kwi-Twitter
Akuzange kuthathe ixesha elide ukuba uAron Connolly aziqhelanise kwaye aqale ukwenza umboniso kwi-academy kunye nokubamba imbeko yakhe yokuqala yezemidlalo (jonga ngasentla). Wenyusa umgangatho ngokukhawuleza kwaye wamenywa ukuba athathe inxaxheba kukhuphiswano lwemidlalo eliqela.
Iinombolo ze-Aaron Connolly yobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Indlela eya kwiNdaba ibali
Ibali lokuqala lokuphumelela kwebhola uAaron Connolly weza kukhuphiswano oluthile xa wafumana amanqaku e-18 njengomntu oneminyaka eyi-15. Impumelelo ye-whizkid yambona encedisa iqela lakhe ukuba liphumelele itrayi yendawo eyayithetha lukhulu kubazali bakhe.
Indlela ka-Aaron Connolly eya kwiBali elidumileyo. Ityala kwi Ezizimeleyo
Ngenxa yempumelelo yakhe, waba ngumdlali obalaseleyo kulo lonke ipalamente yeCastor, Galway, eIreland. Oku kwenzeka ukuba amenzele ithuba lokufumana amanqaku kwiqela lebhola ekhatywayo liphezulu lesiNgesi phakathi kwabo yayinguBrighton.
Kunyaka we-2016, uAron Connolly wenza isigqibo qhubekeka nenkqubo yakhe yokufundisa ngebhola ekhatywayo phesheya. Eli yayilixesha awalenza ngalo Ukuhamba ngaphesheya koLwandle lwaseIreland, ujoyine uBrighton & Hove Albion owayemmemele ukuba alingwe emva kokubona imisebenzi yakhe. Uphembelela ngokwaneleyo ngexesha lokulingwa kwakhe kunye neklabhu yokumnika iminyaka emibini yokufunda. Kwakuloo nyaka u-2016, naye wamenywa ukuba azokumela i-U17 yakhe eIreland kwaye wazibandakanya kwiNdebe ye-FA ye-Irish School ayiphumeleleyo.
UAron Connolly emva kokuphumelela iNdebe ye-FA yeZikolo zaseIreland. Ityala lemifanekiso IArArus
Iinombolo ze-Aaron Connolly yobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ukunyuka Kwidumo Ibali
U-Aaron Connolly wakhula emandleni kunye namandla ebhola lebhola eklabhini kunye nelizwe. Kwi-2017, waba ngunozinti ophambili kwinqanaba lokuphumelela i-2017 UEFA European Under-17 Championship, wafumana amanqaku asixhenxe kwimidlalo emithandathu.
Le ntsebenzo yamenza ukuba akhawuleziswe ngokukhawuleza kwiBonon & Hove Albion ephantsi kwe23 apho wenza khona amatyala akhe eneminyaka elishumi elinesixhenxe. Ubusazi?… Icala le-Under-23 laba yimpumelelo njengoko wayenjalo Umdlali ogama lonyaka kwi-2018 / 2019 Premier League's under-23 set-up, had has 11 times.
U-Aaron Connolly- I-Premier League2 2018-2019 Player of the Award Award. Ityala: I-Twitter
Ukuphumelela eli bhaso libalaseleyo kuye kwatsalela ingqalelo kumphathi weqela eliphambili uGraham Potter owenze ukuba i-Return yakhe ibuyele eBurbon emva kwesivumelwano semali mboleko evela eLuton Town.
U-Aaron Connolly unyamezele ukunyuka kwe-meteoric ukuya kwinqanaba Umhla we-5th ka-Okthobha kumdlalo ngokuchaseneyo ubedlala apho afaka khona inqaku lokuqala lePremier League, wafumana amanqaku amabini kwimpumelelo yamakhaya i-3-0. Apha ngezantsi kukho isiqwenga sesenzo sevidiyo. Credits kwi-SpursTV.
Ubusazi?… Ezo njongo zenze uConnolly wase-100th waseIrishman ukuba afumane inqaku lePremier League kunye nolutsha lokuqala ukufumana amanqaku ngeBrighton kwinqanaba lePremier League.
UAron Connolly ubhiyozela injongo yakhe edumileyo ngokuchasene neSpurs. Ikhredithi: Ezimeleyo
Ngaphandle kwamathandabuzo, umntwana omangalisayo uye wangqina kubathandi bebhola ukuba umgca wokuvelisa wase-Ireland uya phambili AKUFUNI UMDLALO!. Bonke abanye, njengoko besithi, yimbali.
Iinombolo ze-Aaron Connolly yobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ulwalamano lobomi
Emva kwayo yonke indoda ephumeleleyo, kukho umfazi. Kwibhola ekhatywayo njengeCololly, kukho i-WAG ebukekayo ... ebhekisa kwintombi yakhe entle egama linguLucinda Strafford. Njengoko kutyhilwe ngeakhawunti yakhe yemidiya yoluntu, bobabini abathandi baqala ukuthandana ngoJanuwari 2019.
Intombazana entle ka-Aaron Connolly intombazana- uLucinda Strafford. Ityala kwi-Instagram
U-Lucinda Strafford ngaphandle kwamathandabuzo yibrunette entle ekhuthaza ukuzithemba kuye wonke umntu oziqhwayayo. Ungumntu ongazinikeliyo ongenzi nanye into ngaphandle kokubonelela ngenkxaso yeemvakalelo kwindoda yakhe kwanokuba oko kuthetha ukubeka ubomi bakhe.
UAron Connolly unentombi exhasa kakhulu. Ikhredithi kwi-IG
Enye yezona zibini zithandwayo zilufumanayo ehlotyeni sisiqithi seSpanish Tenerife kunye namanzi eIbiza. Njengoko kubonisiwe apha ngezantsi, uLucinda uthandana kakhulu noAaron Connolly, yena aqhele ukubizwa njengo "inkosana yakhe".
UAron Connolly uyakonwabela ukukhwela iphenyane nentombi yakhe- uLucinda Strafford
Bobabini u-Aaron Connolly kunye nentombi yakhe uLucinda bamalunga nje nokuba ngabona bantu batshatileyo baneBlitteron Hove Albion yeBhola ekhatywayo. Into yokuba bobabini bathandana okwethutyana ngoku ishiya ngaphandle kwamathandabuzo ukuba umtshato unokuba linyathelo elilandelayo elisemthethweni.
Iinombolo ze-Aaron Connolly yobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bomntu
Ukwazi iinyani zoBomi buka-Aaron Connolly kude nokumbona esenza isenzo kwisandi kunokukunceda ufumane umfanekiso opheleleyo ngaye.
Iinombolo zoBomi zika-Aaron Connolly Ityala: I-Twitter
Ukwahlulela kumfanekiso ongentla, uyakuqonda ukuba uAron Connolly ungumntu occentric kwaye onamandla okwaziyo ukuhlala onwabile ngento anayo. Uyifumana ngokuziqhelanisa lula namandla amngqongileyo kwaye esebenzisa ingqondo yakhe ngalo lonke ithuba.
Iinombolo ze-Aaron Connolly yobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi Bentsapho
U-Aaron Connolly uyavuya ukufumanisa indlela yosapho lakhe eya kwinkululeko yezemali ebulela kwibhola ekhatywayo. Ukususela kwiintsuku zakhe zobutsha, abazali bakhe babedlale indima yesiqhelo yokuthatha onke amathuba ukumbona edlala yonke imidlalo yakhe.
U-Aaron Connolly nabazali bakhe abaxhasayo emva kokuphumelela idroph.
Bobabini uMike noKaren babamba indiza yokuqala ukuze babone inkwenkwe yokuqala yePremier League ukuqala kunye neenjongo ezimbini zokuqala. Njengoko uCololly wayethatha inxaxheba, uYise onekratshi wayesazi ukuba unyana wakhe sele ewazalisekisile amaphupha akhe.
Iinombolo ze-Aaron Connolly yobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - yokuPhila
Ukwazi indlela yokuphila kaConnolly ngokumalunga nendlela azisebenzisa ngayo iimali zakhe kuya kukunceda ube nomfanekiso ngqondweni wakhe.
Ukuqala, ukuthatha isigqibo phakathi kokusebenziseka kunye nokonwaba okwangoku akukho lukhetho olunzima kumntwana weWhis. Ukwenza imali ebholeni bububi obuyimfuneko kodwa ukuyisebenzisa kwintombazana yakhe uLucinda Strafford njengoko bendwendwela imizekelo mihle yokufika; ( IJamaica, iSt Lucia, iMauritius, i-Ibiza, iAntigua neLas Vegas) kubonakala kuye, indlela eqhelekileyo yokuphila.
Iinombolo zeAaron Connolly Indlela yokuphila. Ikhredithi kwi-IG
Indlela yokuphila ka-Aaron Connolly ayisiqhelekanga njengoko umntu unokucinga emva kokujonga ifoto ngasentla. Kubonakala ngathi usenesiseko esomeleleyo sokugcina imali yakhe ihlawulwe kwaye ilungelelaniswe kakuhle. Ngexesha lokubhala, akukho zimpawu zeCololly showcasing / eziimoto zangaphandle, indawo yokuhlala, iwristwatch ebizayo njl.
Iinombolo ze-Aaron Connolly yobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Inyaniso engekho
Umzekelo Wakhe Wokulinganisa: Njengabaninzi bebhola eIreland, uConnolly unamathela kwilizwe laseIreland, uRobbie Keane awayefaniswa naye. Wambuyisela ngokuba ngumntwana wokuqala waseIreland (okoko uRobbie Keane kwi-1999) ukufumana i-brace kumdlalo obaleka wesiNgesi. Apha ngezantsi ezinye zeendlela zakhe zokufumana amanqaku-amanqaku afaniswa neNqaku leRobbie Keane. Ikhredithi kwiVTSports
Wayecinga ukuba umnxeba wakhe omkhulu wase-I-Ireland uyiprank: Kwiveki nje emva komtshato wakhe nxamnye neSpurs eyamthatha njengendoda yomdlalo, u-Aaron Connolly, Emva kwexesha kwangoko loo mini yafumana umnxeba ovela kumphathi omkhulu wase-Ireland uMick McCarthy wokufumana ilizwe labo elizayo kwi-Euro 2020 eyokulwa kwi-Georgia naseSwitzerland. Uve ngathi yiprank emva kokuba ezixelele iindaba. Abanye, njengoko wabona, baba imbali.
U-Aaron Connolly uncokola nomphathi waseIreland uMick McCarthy kusuku nje emva kokubizwa kwakhe kwiqela eliphezulu lase-Ireland. Ikhredithi kwiFayile yeMidlalo kunye Ezizimeleyo
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda ibali lethu lika-Aaron Connolly wokuKhula koMntwana kunye ne-Untold Biography Facts. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
IBrighton kunye neHove Albion yeDayari yeBhola ekhatywayo
Idayari yeBhola ekhatywayo yase-Ireland
I-Marcel Sabitzer Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
Iinyani zeJosip Ilicic zobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Krzysztof Piatek Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biografics yeNobold
I-Arkadiusz Milik Ibali loBuntwana leNqaku leNgcaciso ye-Untold Biography
I-Erling yeBraut Haaland Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku leMbali ye-Untold Biology
I-Billy Gilmour Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Teemu Pukki Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Dries Mertens Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-N'Golo Kante Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Umhla oguqulwe: nge-25 kaMeyi ngo-2020
I-Steven Bergwijn Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold